नेपालीहरुका लागि कतार प्रहरीका लागि जागिर खुलेकै हो त ? – Namaste Host
नेपालीहरुका लागि कतार प्रहरीका लागि जागिर खुलेकै हो त ?
April 6, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on नेपालीहरुका लागि कतार प्रहरीका लागि जागिर खुलेकै हो त ?
वैदेशिक रोजगार विभागले कतार प्रहरीमा पठाउने भनेर ठगी हुन सक्नेप्रति आम युवालाई सचेत गराएको छ । विभागले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत कतार प्रहरीका लागि कतारस्थित नेपाली दूतावासबाट कुनै मागपत्र प्रमाणीकरण भएर नआएको भन्दै सम्भावित ठगीबाट बच्न सूचित गरेको हो ।
कुन देशबाट कुन कामका लागि कति माग आएको छ भन्ने विषयमा विभागको वेबसाइटबाट हेर्न र यकिन गर्न सकिने भन्दै आधिकारिकता परीक्षण गरेर मात्र वैदेशिक रोजगारको प्रक्रियामा संलग्न हुन विभागले विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेको छ ।
आफ्नै काकाले गरे घिनलाग्दो ह’र्क’त ७ दिन सम्म अर्काको श्रीमती राखेर फर्काए आफु गाउँनै छोडेर फ’रा’र भए (भिडियो सहित)